Loza nahafatesana olona: fiara efatra nifadona, fiara iray nizara roa tanteraka | NewsMada
Loza nahafatesana olona: fiara efatra nifadona, fiara iray nizara roa tanteraka
Mafy ny fifandonana ! Fiara iray nizara roa mihitsy teny Talatamaty, vokatry ny fifandonana tamina fiara iray teny an-toerana. Fandehanana mafy sy fisingonana nahatonga ny loza, izay nahafatesana olona…
Nitrangana loza mahatsiravina teny Talatamaty, omaly tamin’ny 2 ora maraina teo, izay nifandonana fiara efatra. Ny iray tamin’ireo izay nizara roa mihitsy ilay fiara ka nipitika lavitra ny tapany. Voalaza fa maty tamin’ity loza ity ny olona iray. Ankoatra ireo naratra, nisy mihitsy ireo vehivavy tao anaty fiara. Divi-janahary ny tsy nahafaty azy.
Araka ny fanazavana azo, nahatonga ny loza ny fandehanana mafy. Fiara iray Peugeot 2008 nandeha mafy avy any Ivato nisongona fiara maro no nifandona tamin’ny fiara nifanena taminy tao anaty fiolanana eo Talatamaty.
Nirefotra tamina fiara Opel iray io fiara io ka io no nizara roa tanteraka. Avy eo, mbola nifatratra tamin’ny fiara roa hafa tao aoriana sy teo anilany izy. Samy voa mafy ireo fiara rehetra ireo, ary samy nisy naratra avokoa ny tao anatiny.
“Tsy mbola fahita ny loza tahaka ity, indrindra ny fahitana ilay fiara nizara roa ity. Mafy dia mafy ny fifandonana ny dikan’izany. Fandehanana mafy loatra ihany koa satria malalaka ny lalana”, hoy ny fanazavan’ny olona eny Talatamaty. Tonga teny an-toerana ny zandary nanao ny fanadihadiana. Ny olona teny an-toerana nilaza fa nahenoana fofona alikaola ny olona ny fiara nahatonga ny loza.
Anisan’ny toerana ahitana loza matetika iny lalana Ivato Talatamaty iny, ankoatra ny eny amin’ny Digue, raha ny eto an-dRenivohitra sy ny manodidina. Malalaka ny lalana, kanefa tery ihany manoloana ny mpampiasa azy mirimorimo tahaka ity nitranga ity.
Nilaza ny avy eny amin’ny kaominina Ivato ny mba hitandreman’ny rehetra amin’ny fandehanana mafy eny amin’iny lalana iny.
Tsy misy fepetra manokana
Tsy misy fepetra manokana amin’ny fisorohana ny lozam-pifamoivoizana sy ny fandehanana mafy ankoatra ny fanentanana ny mpamily mba samy hitandrina. Azo atao ihany anefa ny mandrara ireo mpamily mandray alikaola tsy hitondra fiara intsony, satria ny 90%-n’ny lozam-pifamoivoizana, araka ny isa avy amin’ny mpitandro filaminana, vokatry ny fandraisan’ny mpamily zava-mahadomelina sy alikaola avokoa.
Anisan’ny mamono olona be indrindra eto amintsika ihany koa ny lozam-pifamoivoizana, araka ny tatitra nataon’ny avy amin’ny minisiteran’ny Fitateranan vao herinandro izay. Misy ny fanentanana nataon’izy ireo mba hitandreman’ny rehetra. Anisan’ny singa iray nivoaka tamin’izany ny mety fisian’ny kolikoly amin’ny fanomezana fahazoan-dalana mamily fiara, ka mety hisian’ny irika ho amin’ny tsy fahafehezana ny fiara sy ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana. Mbola asa be ho an’ny tompon’andraikitra, noho izany, ny hamehy na hisoroka ny lozam-pifamoivoizana eto amintsika.
Une réponse à "Loza nahafatesana olona: fiara efatra nifadona, fiara iray nizara roa tanteraka"
Ra Jo 31/07/2017 à 13:20
Salama! be diso ary tsy mirafitra tsara ilay fehezan-teny atanareo. fanamarihina fotsiny